जब सुशान्तले राखीकाे सपनामा “म तिम्रो गर्भबाट जन्म लिनेछु” भनेपछि…… – Jagaran Nepal
जब सुशान्तले राखीकाे सपनामा “म तिम्रो गर्भबाट जन्म लिनेछु” भनेपछि……
बलिउड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतको आ’त्मह’त्याको एक हप्ता मात्र भएको छ। उनका साथीहरु र प्रशंसकहरु को उनको अचानक दु’खद मृ’त्यु को लागी ठीक हुन सकेको छैन। सबै जना जान्न चाहन्छन् किन उनले यो कदम चाले। यसैबीच, अब बलिउडको आइटम गर्ल राखी सावंतले सुशांत सिंह राजपूतले उहाँसँग कुरा गरेको दावी गरेकी छन।
त्यहाँ कुनै ब्यारोसा छैन जब उनको ओओल जुलुल वार्ता र बेतुका भिडियोको बारेमा छलफलमा रहिरहेकी राखी सावन्तले के गर्ने वा के भन्ने भन्ने कुराको चर्चा छैन। राखी धेरै दिनदेखि छलफलबाट टाढा थिइन। तर कसरी यो लामो समय को लागी हुन सक्छ? राखी सावंतले यस पटक यस्तो दावी गरेका छन कि सुशान्तको प्रशंसकहरु र परिवारको खुट्टामुनि खस्नेछ। राखीले भनिन् कि सुशांत सिंह राजपूतले देहत्गयाग गरेपछि उनको सपना देखें ।
वास्तवमा, राखीले उनको आधिकारिक इन्स्टाग्राम मार्फत एक भिडियो साझेदारी गरेकी छिन् । यस भिडियोको माध्यमबाट उनले सुशांत सिंह राजपूतको बारेमा त्यस्तो दा’वी गरेका छन जुन सुन्दा सबै छक्क पर्नेछन्। राखीले यस भिडियोमा यसो भनिरहेकी छिन् कि, ‘म राती सुतिरहेकी थिएँ र अचानक एउटा झटका लाग्यो। मैले सोधें यो को हो? त्यसपछि आवाज आयो – म सुशांत। के तपाईं विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ कि सुशांत मेरो सपनामा आए र भने कि म फेरि जन्मँदै छु। मेरा प्रशंसकहरूलाई भन, म नयाँ गरी जन्मेको छु। ‘
राखी भन्छिन्, ‘मैले भने- कसरी? त्यसोभए उनले भने कि म तिमीलाई चाँडै भन्नेछु मैले भने कि मलाई नभन्नुहोस्। त्यसोभए सुशांतले भने, ‘राखी तपाईको विवाह हुनेछ र म तिम्रो गर्भबाट जन्म लिनेछु।’ राखीको यो भिडियो सोशल मीडियामा लगातार भाइरल भइरहेको छ। उनको यस भिडियोमा प्रशंसकहरू अत्यन्त रिसाएका छन्। व्यक्तिहरू भन्छन् कि म,रेका कसैलाई त्यस्तो ठट्टा गर्नु ठीक हुँदैन।
उल्लेखनीय कुरा के छ भने, सुशांत सिंह राजपूतले 14 जुनमा मुम्बईको बान्द्रामा उनको घरमा झु’ण्डिएर आ’त्मह’त्या गरे। कसैलाई थाहा छैन किन सुशान्तले यो कदम चाले। पुलिसले सुशान्तको आ’त्मह’त्याको बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। जसका लागि सुशांतका नजिकका व्यक्तिहरू सोधपुछ भइरहेका छन्